नेपालमै पहिलोपटक 'वेद' कण्ठ पार्ने प्रतियोगिता ! - LaltinKhabar
नेपालमै पहिलोपटक ‘वेद’ कण्ठ पार्ने प्रतियोगिता !
काठमाडौँ, २६ फागुन। नेपालका पहिलो वेदाचार्य एवं वेद विषयका पहिलो प्राध्यापक सोमनाथ पौडेलको स्मृतिमा देशमै पहिलोपटक वेद कण्ठस्थ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । विसं २००९ मा पुतलीसडकमा नेपाल राजकीय संस्कृत महाविद्यालय स्थापना भएसँगै पौडेलले पहिलोपटक वेद प्राध्यापन गर्नुभएको थियो । महाविद्यालय पछि वाल्मीकि विद्यापीठमा नामाकरण भएको थियो ।